1. အိတ်တလုံး အသုံးဝင်ပုံ - လှသမိန်
eBook file size: 87.5 KB ebook pages:4Publication: ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မေလ၊ အမှတ် ၁ ထုတ် စာပေလုပ်သားမဂ္ဂဇင်းတွင်ပါသော လွယ်အိတ်ကို ပမာပြုကာ စကားပုံ များ ဖြစ်ပေါ်လာပုံတို့ကို ဖော်ပြရေးသားထားသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ ...
2. မာန်အောင်ကျွန်း စကားပုံများ - မောင်တောက်ပြောင်
eBook file size: 89.1 KB ebook pages:5Publication: ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မေလ၊ အမှတ် ၁ ထုတ် စာပေလုပ်သားမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ Download Related Articles စကားပုံနှင့်ဆက်စပ်သော ...
3. ထားဝယ်ရိုးရာ ဓလေ့များ - ရွှေဝယ်ဧ
eBook file size: 94.1 KB ebook pages:5Publication: ၁၉၆၉ ခု၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ အမှတ် ၂၈၇ ထုတ် သွေးသောက်မဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ထားဝယ်စကားပုံများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော စူဠလိပ် ရေထဲလွှတ်သည့်စကားပုံကို ဇာတ်လမ်းနှင့်တကွ ရှင်းလင်းတင်ပြထားသော ...
ကြွေး ကြွေး (နာမ်) (၁)နောင်မှ ပြန်ပေးမည်ဟူသော ကတိနှင့်ချေးလှည့်ယူထားသောငွေ၊ ပစ္စည်း စသည်။ မြီ။ ကြွေးတင် ဘုရင်ဆပ် ဤစကားမှာ မြန်မာဝေါဟာရတွင် စကားပုံ တစ်ခုအဖြစ်ဖြင့် တည်ရှိနေသည်။ ကြွေးထူကြွေးပူသူတို့ ...
... မိမိက ဆက် ရက်တောင်ပံကျိုးတော့ အဖြစ်မခံနိုင်ချေ။"  ငွေတာရီ၊ ၂၃၂၊ ၁၃၅။ (​မြန်မာစကားပုံ) ကြောင်တစ်သက် ကြက်တစ်မြုံ ကြောင်တစ်ကောင်ကြောင့် ကြက်တစ်မြုံလုံး ပျက်စီးရသကဲ့သို့ အနိုင်အထက် ပြုသူတစ်ဦးကြောင့် ...
... ထွက်နိုင်သည်ဟု မိန့်ဆိုကြ ၏]။ (ပေါဓာန်) ကြလို ဝါးပိုးဝါး။ (ပေါဓာန်) ကြမာ ကြမ(ဋ)[ကရ်မ-ဟုဖတ်။ ။ကမ်, ကံနှင့်အတူတူပင်]။ "ကံကြမ္မာ မကောင်းတော့ မြင်းမြီးက လထစ်ဖြစ်" (စကားပုံ)။ (ပေါဓာန်) ...
... ရှိတဲ့အတိုင်း နေချင်ပါတယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်။"  သူရိယ၊ ၄၊ ၂၊ ၅၈။ "သီချင်းတစ်ပုဒ် ဆိုပါဦးဟု ပွဲတောင်းသဖြင့် ရေငတ်ခိုက်တွင် ရေတွင်းထဲသို့ ကျလေသည်။"  စာအု။ ၂၃။ (မြန်မာစကားပုံ) ရေလှူကျိုး ...
... ယွင်းမှားသည်။ ကတုတ် တူးဖို့ကာရံထားသည့်အကာအကွယ်တစ်မျိုး။ ခံတပ်(အသျ)။ ကတုန်း ကတော့ပုံခွက်ငယ်။ ခေါင်းတုံး။ ကတောက် အော်, မြည်သည် "ကြက်မလင်လို ကတောက်၊ မိန်းမလင်လို ဆံထုံးမောက်"(စကားပုံ) ...
9. ချစ်တဲ့သူ ပျို့မောင်ထွေး - ဒါရိုက်တာမြင့်မောင်
... Download -Related Articles- ကယားတုိ႔ဌာနီ ေငြေတာင္ျပည္ - စာေရးဆရာ ဒါရုိက္တာ ျမင့္ေမာင္ တံငါလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စကားပုံမ်ား - ဦးျမင့္ေမာင္ ...
10. သွ်မ္းရုိးမ စြယ္စုံ အဘိဓာန္ (Daily Update)
... မကလုိက္ရ ျဖစ္သကဲ့သို႔ မိမိအစြမ္းအစကို ျပမည္ဟု အားခဲထားသူသည္ အစြမ္းအစကို ျပရခါနီးမွ အေၾကာင္း မညီညႊတ္ေသာေၾကာင့္ မျပလုိက္ရ ျဖစ္သည္။ (က ခ်င္လ်က္ လက္နာ - ဟူ၍လည္း အသုံး ရွိသည္။) (ျမန္မာစကားပုံ) ကေျခ - နံ၊ ...
11. ရှေးဦးအဘိဓာန်တစ်စောင် - မေမြို့မိုးကြည်
12. ရှမ်းရိုးရာ စကားပုံများ - စိန်ထွန်း(ပခုက္ကူ)
13. နာဂတို့၏ကိုင်ဘီးပွဲတော် - ကိုရဲ(စိုက်ပျိုးရေး)
... စကားပုံ - မႏုႆေက်ာ္၀င္း နာဂေက်းလက္ သားေခ်ာ့ေတးမ်ား - ေမာင္ေၾကာ့ဦး ...
14. နာဂကျေးလက် သားချော့တေးများ - မောင်ကြော့ဦး
eBook file size: 56.7 KB ebook pages:4Publication: ၁၉၇၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ အတွဲ ၂၇၊ အမှတ် ၃၁၉ ထုတ် ရှုမဝရုပ်စုံမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ Download -Related Articles- မကူရီနာဂ စကားပုံ ...
15. သမုိင္း၀င္ စာတမ္းမ်ား ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ (ဒုတိယတြဲ)
... (ျပည္ေထာင္စုသားစာေစာင္) ၁၁။ ကယားျပည္နယ္ တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ ရုိးရာပြဲေတာ္မ်ား (ေဒၚခင္ခင္စု-မႏုႆေဗဒ ဌာန) ၁၂။ ကယားစကားပုံ (ဦးမင္းႏုိင္) ၁၃။ အထက္ျမန္မာႏုိင္ငံကို ၿဗိတိသ်ွတုိ႔ သိမ္းယူၿပီးေနာက္ ...
16. မေနာေျမက လာခ်ိဒ္ တုိင္းရင္းသား - ျမတ္ေ၀တုိး(ပညာေရးတကၠသုိလ္)
... ၁၄။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ပုံစံ၊ ၁၅။ ေက်းရြာဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ရြာအမည္ ေခၚေ၀ၚပုံ၊ ၁၆။ စားေသာက္ပုံ၊ ၁၇။ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈ၊ ၁၈။ အတိတ္နိမိတ္ေကာက္ျခင္း၊ ၁၉။ ေဆာင္ဓေလ့ႏွင့္ေရွာင္ဓေလ့၊ ၂၀။ စကားပုံႏွင့္ရုိးရာပုံျပင္မ်ား၊ ...
17. မကူရီနာဂ စကားပုံ - မနုဿကျော်ဝင်း
... စကားပုံနှင့်ဆက်နွယ်သော အကြောင်းအရာများ ...
18. မြွေနဂါးစကားပုံနှင့်ယုံကြည်မှုများ - ဇဝန
eBook file size: 94.4 KB ebook pages:5Publication: ၁၉၇၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ အမှတ် ၄ဝ၅ ထုတ် သွေးသောက်မဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ Download Related Articles စကားပုံနွင့္ဆက္စပ္ ...
19. တိရစ္ဆာန်နှင့်ပတ်သက်သည့်စကားပုံများ - သလ္လာ-မောင်ဆွေသက်
eBook file size: 110 KB ebook pages:6Publication: ၁၉၇ဝ ခုနှစ်၊ မေလ၊ အမှတ် ၂၉၂ ထုတ် သွေးသောက်မဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ Download Related Articles စကားပုံနွင့္ဆက္စပ္ စာေပမ်ား ...
20. ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းမှ သားငါးစကားပုံများ - မောင်တောက်ပြောင်
eBook file size: 93.6 KB ebook pages:6Publication: ၁၉၈၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ၊ အမှတ် ၄၉၈ ထုတ် သွေးသောက်မဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ Download -Related Articles- စကားပုံနွင့္ဆက္စပ္ စာေပမ်ား ...